မတူပီခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်ရန် ဘတ်ဂျက်ပြန်အပ်ရမည်ဖြစ်တာကြောင့် အစိုးရမှဖနိုင်-ငလိုင်အကြားတွင် တည်ဆောက်ရန်သက်မှတ်ခြင်းဖြစ်ဟုဆို - Chin World
Home Chin မတူပီခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်ရန် ဘတ်ဂျက်ပြန်အပ်ရမည်ဖြစ်တာကြောင့် အစိုးရမှဖနိုင်-ငလိုင်အကြားတွင် တည်ဆောက်ရန်သက်မှတ်ခြင်းဖြစ်ဟုဆို
မတူပီခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်ရန် ဘတ်ဂျက်ပြန်အပ်ရမည်ဖြစ်တာကြောင့် အစိုးရမှဖနိုင်-ငလိုင်အကြားတွင် တည်ဆောက်ရန်သက်မှတ်ခြင်းဖြစ်ဟုဆို
မတူပီခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး တည်ဆောက်ရန်အတွက် ရရှိထားသော ဘတ်ဂျက်မှာ စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့တွင် ဘတ်ဂျက်ပိတ်တော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရသတ်မှတ်ထားသည့် ဖနိုင်-ငလိုင်ကြားတွင် တည်ဆောက်ရန် ပန္နက်ရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်ကပြောသည်။
စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “စက်တင်ဘာလ ၃၀ ဆိုရင် ဘတ်ဂျက်ကပိတ်တော့မှာဆိုတော့ အခုတောင် သြဂုတ်လရောက်နေပြီ ဒါကြောင့် အချိန်မှီသာ မလုပ်နိုင်ရင် ဘတ်ဂျက်တွေကို ပြန်အပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ အဲလိုပြန်အပ်ခဲ့ရင် ကန့်ကွက်နေကြတဲ့ လူတွေကတာဝန်ယူနိုင်မှာလား? စက်တင်ဘာလဆိုရင် ဘတ်ဂျက်က ပြန်အပ်ရမှာ ဆိုတော့ အခုပစ္စည်းဝယ်တာတွေ လုပ်နေပြီ။ ဒါကြီးကို မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီး ပြန်အပ်လိုက်ရင် လွယ်လွယ်လေး၊ လျှောက်ရတာဘဲခက်တာ ဒါကိုမှနားမလည်ဘူးဆိုရင် ဒီခရိုင်ရုံးက ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး”ဟုပြောသည်။
မတူပီခရိုင် ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး တည်ဆောက်ရန် ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလ တစ်ရက်နေ့ မှစပြီး ဘတ်ဂျက်ကျလာသော်လည်း ခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်မည့် မြေနေရာပြဿနာများကြောင့် မတည်ဆောက်ဖြစ်တာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပြီး ယခုလိုတည်ဆောက်ရန် အတည်ပြုလိုက်ခြင်းမှာ ခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်ဖြစ်စေချင်သော စေတနာကြောင့်ဟု စည်ပင်ဝန်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောသည်။
သူကဆက်ပြီး “ဘတ်ဂျက်ရတာလည်း တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ် အခုဘတ်ဂျက်ကို ပြန်ပြီးအပ်ဖို့တောင် ရောက်နေပြီ တစ်နှစ်လုံးလုံး မြေကိစ္စရှုပ်ထွေးနေတာနဲ့တင် မဆောက်ဖြစ်တော့ဘူး။ အခု ပန္နက်ရိုက် လည်းလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းကိုတော့ ၂၀၁၉-၂၀အတွင်းမှာဘဲ ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ခရိုင်ရုံးဆောက်ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ဖြစ်တယ်”ဟုပြောသည်။
ဖနိုင်-ငလိုင်ကြားတွင် ခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်ရန် ပြည်နယ်အစိုးရ ဌာနအသီးသီးမှ တတ်ရောက်ခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၅ရက်နေ့တွင် ပန္နက်ရိုက် အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပြီး ခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်ရန် ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်ကိုလည်း ကျပ်သန်း(၁၇၀၀) အသုံးပြုတည်ဆောက်မှာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မတူပီခရိုင်ရုံးကိုမြို့နှင့် ၈ မိုင်ဝန်းကျင်ဝေးသည့် ဖနိုင်နှင့် ငလိုင်အကြားတွင် တည်ဆောက်ရန် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ အတည်ပြုမှုကို မကျေနပ်သည့် ပြည်သူ ခြောက်ထောင်ကျော်မှ လက်မှတ်ရေးထိုး ပြီး သမ္မထံသို့ စာတင်မှာမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ငလားရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုဆလောင်းမှ “ပြည်နယ်အစိုးရကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့စကားကို နားမထောင်ဘူး သူတို့လုပ်ချင်တာ လုပ်တယ်ဆိုပြီး လူထုခံယူပွဲပုံစံနဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ သမ္မတဆီမှာ စာတင်မယ်လို့သိရတယ်။ လက်ရှိကန့်ကွက်တဲ့သူ လူဦးရေခြောက်ထောင်ကျော်က ကန့်ကွက်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ ဒီနေ့လည်း ရွာကလူတွေ ထပ်ရောက်မယ်ဆိုတော့ လူဦးရေက ဘယ်လောက်ထိ ရှိမလဲဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး”ဟုပြောသည်။
လက်ရှိခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်မည့် နေရာသည် မတူပီမြို့မှ စစ်တပ်ဗျူဟာကုန်းကို ဖြတ်ပြီးသွားရသည့် နေရာဖြစ်သည့်အတွက် မြို့အင်္ဂါရပ်နှင့်မညီသလို ပြည်သူများအတွက်လည်း လုံခြုံမှုမရှိဟု သူကဆက်ပြောသည်။ လက်ရှိခရိုင်ရုံးတည်ဆောက်မည့် မြေနေရာနှင့် ပက်သက်ပြီး မြို့ပေါ်ရှိဒေသခံပြည်သူများမှ ၎င်းတည်နေရာတွင်မတည်ဆောက်ရန် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုများကိုလည်း သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မတူပီခရိုငျရုံးတညျဆောကျရနျ ဘတျဂကြပွနျအပျရမညျဖွဈတာကွောငျ့ အစိုးရမှဖနိုငျ-ငလိုငျအကွားတှငျ တညျဆောကျရနျသကျမှတျခွငျးဖွဈဟုဆို
မတူပီခရိုငျအထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနရုံး တညျဆောကျရနျအတှကျ ရရှိထားသော ဘတျဂကျြမှာ စကျတငျဘာလ ၃ဝရကျနတှေ့ငျ ဘတျဂကျြပိတျတော့မညျ ဖွဈသောကွောငျ့ အစိုးရသတျမှတျထားသညျ့ ဖနျိုငျ-ငလိုငျကွားတှငျ တညျဆောကျရနျ ပန်နကျရိုကျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျကပွောသညျ။
စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “စကျတငျဘာလ ၃၀ ဆိုရငျ ဘတျဂကျြကပိတျတော့မှာဆိုတော့ အခုတောငျ သွဂုတျလရောကျနပွေီ ဒါကွောငျ့ အခြိနျမှီသာ မလုပျနိုငျရငျ ဘတျဂကျြတှကေို ပွနျအပျရမှာဖွဈတယျ။ အဲလိုပွနျအပျခဲ့ရငျ ကနျ့ကှကျနကွေတဲ့ လူတှကေတာဝနျယူနိုငျမှာလား? စကျတငျဘာလဆိုရငျ ဘတျဂကျြက ပွနျအပျရမှာ ဆိုတော့ အခုပစ်စညျးဝယျတာတှေ လုပျနပွေီ။ ဒါကွီးကို မလုပျတော့ဘူးဆိုပွီး ပွနျအပျလိုကျရငျ လှယျလှယျလေး၊ လြှောကျရတာဘဲခကျတာ ဒါကိုမှနားမလညျဘူးဆိုရငျ ဒီခရိုငျရုံးက ဖွဈလာစရာ အကွောငျးမရှိတော့ဘူး”ဟုပွောသညျ။
မတူပီခရိုငျ ထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနရုံး တညျဆောကျရနျ ၂၀၁၈ အောကျတိုဘာလ တဈရကျနေ့ မှစပွီး ဘတျဂကျြကလြာသျောလညျး ခရိုငျရုံးတညျဆောကျမညျ့ မွနေရောပွဿနာမြားကွောငျ့ မတညျဆောကျဖွဈတာ တဈနှဈပွညျ့တော့မှာဖွဈပွီး ယခုလိုတညျဆောကျရနျ အတညျပွုလိုကျခွငျးမှာ ခရိုငျရုံးတညျဆောကျဖွဈစခေငျြသော စတေနာကွောငျ့ဟု စညျပငျဝနျကွီးဦးစိုးထကျကပွောသညျ။
သူကဆကျပွီး “ဘတျဂကျြရတာလညျး တဈနှဈပွညျ့တော့မယျ အခုဘတျဂကျြကို ပွနျပွီးအပျဖို့တောငျ ရောကျနပွေီ တဈနှဈလုံးလုံး မွကေိစ်စရှုပျထှေးနတောနဲ့တငျ မဆောကျဖွဈတော့ဘူး။ အခု ပန်နကျရိုကျ လညျးလုပျပွီးပွီဆိုတော့ ဆောကျလုပျရေးပိုငျးကိုတော့ ၂၀၁၉-၂ဝအတှငျးမှာဘဲ ဝငျရမှာဖွဈတယျ။ ခရိုငျရုံးဆောကျဖွဈစခေငျြတဲ့ စတေနာနဲ့ဖွဈတယျ”ဟုပွောသညျ။
ဖနိုငျ-ငလိုငျကွားတှငျ ခရိုငျရုံးတညျဆောကျရနျ ပွညျနယျအစိုးရ ဌာနအသီးသီးမှ တတျရောကျခဲ့ပွီး သွဂုတျလ ၅ရကျနတှေ့ငျ ပန်နကျရိုကျ အခမျးအနားကငျြးပခဲ့ပွီး ခရိုငျရုံးတညျဆောကျရနျ ပွညျနယျဘတျဂကျြကိုလညျး ကပျြသနျး(၁၇၀၀) အသုံးပွုတညျဆောကျမှာဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
မတူပီခရိုငျရုံးကိုမွို့နှငျ့ ၈ မိုငျဝနျးကငျြဝေးသညျ့ ဖနိုငျနှငျ့ ငလိုငျအကွားတှငျ တညျဆောကျရနျ ပွညျနယျအစိုးရ၏ အတညျပွုမှုကို မကနြေပျသညျ့ ပွညျသူ ခွောကျထောငျကြျောမှ လကျမှတျရေးထိုး ပွီး သမ်မထံသို့ စာတငျမှာမညျဖွဈကွောငျးလညျး သိရှိရသညျ။
ငလားရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူး ကိုဆလောငျးမှ “ပွညျနယျအစိုးရကတော့ ပွညျသူတှရေဲ့စကားကို နားမထောငျဘူး သူတို့လုပျခငျြတာ လုပျတယျဆိုပွီး လူထုခံယူပှဲပုံစံနဲ့ လကျမှတျရေးထိုးပွီးတော့ သမ်မတဆီမှာ စာတငျမယျလို့သိရတယျ။ လကျရှိကနျ့ကှကျတဲ့သူ လူဦးရခွေောကျထောငျကြျောက ကနျ့ကှကျကွောငျး လကျမှတျရေးထိုးပွီးတော့ ဒီနလေ့ညျး ရှာကလူတှေ ထပျရောကျမယျဆိုတော့ လူဦးရကေ ဘယျလောကျထိ ရှိမလဲဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူး”ဟုပွောသညျ။
လကျရှိခရိုငျရုံးတညျဆောကျမညျ့ နရောသညျ မတူပီမွို့မှ စဈတပျဗြူဟာကုနျးကို ဖွတျပွီးသှားရသညျ့ နရောဖွဈသညျ့အတှကျ မွို့အင်ျဂါရပျနှငျ့မညီသလို ပွညျသူမြားအတှကျလညျး လုံခွုံမှုမရှိဟု သူကဆကျပွောသညျ။
လကျရှိခရိုငျရုံးတညျဆောကျမညျ့ မွနေရောနှငျ့ ပကျသကျပွီး မွို့ပျေါရှိဒသေခံပွညျသူမြားမှ ၎င်းငျးတညျနရောတှငျမတညျဆောကျရနျ ကနျ့ကှကျ ဆန်ဒပွမှုမြားကိုလညျး သုံးကွိမျတိုငျတိုငျ ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။
Previous post လူများစုအတွက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် လူနည်းစု၏အကျိုးစီးပွားအတွက် အစိုးရလုပ်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းစရာမရှိဟု စည်ပင်ဝန်ကြီးပြော
Next post ရက္ခိုင့်တပ်မတော်AAလွှတ်ပေးခဲ့သော ကင်းတလင်းရွာသားများမီးဇာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ ပလက်ဝမြို့ပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရန်စီစဉ်လျှက်ရှိ
Major William Sa Lian Zam (ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ်) နှင့် ချင်းဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ တော်လှန်ရေးသမိုင်း (အပိုင်း ၂)
လိုင်လင်ပီးလေယာဉ်ကွင်း ၂၀၂၀ခုနှစ် မေလတွင် အပြီးသတ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေဟုဆို
မြို့နယ် ၁၇ ခုအတွက် အသုံးပြုမည့် ကန်ဒေါ်လာ ၂၄၀ အနက် ချင်းပြည်နယ်မှ ၄ မြို့နယ်ပါဝင်
တမူး-ကလေးအကွား တံတားမြား မပွုပွငျပေးပါက ယခုလအတှငျးဆန်ဒထုတျဖျောမညျဟုဆို
ချင်းပြည်နယ်တွင်း လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ခြောက်သောင်းကျော်တိုးမည်
ခငျြးပွညျနယျတှငျ ၂၀၁၉ခုနှဈထကျ ၂၀၂၀ ခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျတနျးစာမေးပှဲအောငျမွငျသူနှုနျးတကျလာ
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ပြုလုပ်သူများကိုအခွန်(၇)နှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်အပြင် မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးမည်